भाइबरले ल्यायो ‘माइ नोट्स’मा दशैंको लागि रिमाइण्डर सेट गर्न मिल्ने फिचर « Lokpath
२०७७, ३० आश्विन शुक्रबार १६:४७
प्रकाशित मिति : २०७७, ३० आश्विन शुक्रबार १६:४७
काठमाडौं । भाइबरले प्रयोगकर्ताहरुलाई आफ्ना कार्यहरु र अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुका लागि रिमाइण्डर राख्न मिल्ने गरेर ‘माइ नोट्स’मा विशेषता थप गरेर प्रस्तुत गरेको छ ।
रिमाइण्डरहरु र कार्य सूचीहरुलाई नियन्त्रण गर्नु हाम्रो जीवनमा बढी महत्वपूर्ण भइसकेको छ । यी रिमाइण्डरहरुले जन्मदिन सम्झिन, आउँदै गरेको परिक्षाहरु सम्झिन, र कन्फ्रेन्स् कलहरु सम्झिन मद्दत गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
भाइबरमा माइ नोट्सको नयाँ रिमाइण्डर विशेषताका साथ प्रयोगकर्ताहरुले साथीभाइ, परिवार र सहकर्मीहरुलाई सन्देश पठाउन प्रयोग गर्ने एउटै प्लेटफर्ममा नै उनीहरुका दिनहरुको रेकर्ड राख्न समर्थ बनाइदिन्छ र अहिलेको नयाँ परिस्थितिसँग सहजै अनुकूल हुन मदत गर्दछ ।
यसपाली तिहारमा स्वदेशी फूलले धान्ला बजारको माग ? यसो भन्छन् व्यवसायीहरु
काठमाडौं । यस वर्षको तिहार अधिकमासका कारण झण्डै एक महिना पछाडि धकेलिएको छ
दशैँ लगत्तै २ दिन कारोबार भएको शेयर बजारमा उत्साह, उमङ्ग र उछाल :५२ अर्ब भन्दा धेरैले बढ्यो लगानीकर्ताको सम्पती
काठमाडौं । दशैँको छुट्टि गत विहीबार शेयर बजार बढेर बन्द भएको थियो ।
अल्पकालीन लगानीकर्ता हाबी हुँदा शेयर बजारमा सामान्य करेक्शन
काठमाडौं । बुधवार ४० अंक भन्दा धेरैले बढेको बजार बिहीवार भने झिनो अंकले
बिओके क्यापिटलले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, कति प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव हुँदैछ ?
काठमाडौं । बिओके क्यापिटल लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको